माउण्ट फुजी चढ्ने सोच्दै हुनु हुन्छ ? के के प्याक गर्नु पर्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > माउण्ट फुजी चढ्ने सोच्दै हुनु हुन्छ ? के के प्याक गर्नु पर्छ थाहपाई राखौ।
माउण्ट फुजी चढ्ने सोच्दै हुनु हुन्छ ? के के प्याक गर्नु पर्छ थाहपाई राखौ।
माउण्ट फुजी जापानको सबै भन्दा अग्लो हिमाल हो। हरेक बर्षको जुलाई देखि सेप्टेम्बरमा सयौ मानिस आफ्नो बकेट लिस्टमा भएको माउण्ट फुजी चढ्छन्। माउण्ट फुजीको (३७७६ मि) उचाई नेपाली हिमाल संग दाज्दा होचो भएता पनि चढ्नु पूर्व राम्रो तयारि गर्नु पर्छ। माउण्ट फुजी चढ्न गर्नु पर्ने केहि सामान्य तयारीको ’boutमा हजुरलाई बताउनेछौ। यसमा चढ्ने समय, कपडा, खाना, जाने तरिका र ईमरजेन्सी सप्लाईको कुरा समेटिएको हुनेछ।
१. चढ्ने समय वा महिना
आधिकारिक रुपमा फुजी चढ्ने महिना जुलाई देखि मध्य सेप्टेम्बर भएता पनि राम्रो तयारी गर्ने हो भने फुजी अरु महिनामा पनि चढ्न सकिन्छ। तर अरु महिनामा चढ्दा बरफ र हिउले बाटो चिप्लोहुने हुनाले खतरा बढी हुन्छ। हिउदमा चढ्ने हो भने मौसम खराबहुने भएकाले अल्पाइन एक्स र अन्य बरफ फुटाउने सामग्री चाहिन्छ। हिउदमा फुजीमा चल्ने हावा ८००० मिटरको हिमाल सरह हुन्छ। हिम पहिरोको पनि जोखिम हुने भएकाले अनुभबी मानिस बाहेकलाई अरु महिना फुजी चढ्ने सल्लाह दिईदैन।
A post shared by EARTH OFFICIAL (@earthofficial) on Apr 8, 2019 at 6:51am PDT
समयको हिसाब गर्ने हो भने फुजी चढ्न ५-७ घण्टा लाग्छ अनि ओर्लन ३-४ घण्टा लाग्छ। धेरै मानिस हरु फुजी राती चढ्ने गर्छन। उनीहरु बिहानको सुर्योदय हेर्न यसो गर्छन। यसो गर्दा हिमालमा बास बसिरहनु पर्दैन। सुर्योदय हेर्ने उदेस्य नभएका मानिसहरु फुजी दिउसो चढ्दा पनि फरक पर्दैन।
२. लत्ता कपडा
जुलाई देखि मध्य अगस्त सम्म माथि टि- सर्ट, फ्लिस र ज्याकेट भए हुन्छ। तललाई दुइ लेएरको पाईट भए हुन्छ। सेप्टेम्बर ताका अलि चिसो हुनाले एउटा लेएर कपडा थप्दा राम्रो हुन्छ। पानी पर्ने सम्भावना बहेकोले रेन कोट भने छुटाउनु हुदैन। कम्बिनिमा पाईने १००० यनको रेन कोट पर्याप्त हुन्छ।
खुट्टाको जोइण्ट दुख्ने बिरामीहरुले हाइकिङ्ग जुत्ता लगाउदा राम्रो हुन्छ। नत्र सामान्य जोगिंग गर्ने स्पोर्ट्स जुत्ता काफी हुन्छ। हाईक गर्दा चाइने लौरो (हाईकिङ्ग पोल) भने अप्सनल हुन। चाहिएको खण्डमा फुजिको बेसमा किन्न सकिन्छ। मानिसहरु सम्झनाको लागि यो किनी हरेक स्टेशनमा स्ट्याम्प लगाउछन। एउटा ऊनको टोपी बोक्न छुटाउनु हुदैन। यसले जाडोबाट बचाउछ र हेड्ल्याम्पले निधारमा असजिलो गर्ने हुनाले टोपी लगाउदा सजिलो हुन्छ। सनग्लास चाहि ओर्लिदा घाम आखा पर्ने भएकोले बोक्दा राम्रो हुन्छ।
A post shared by MartinMeetsSantiago (@martinmeetssantiago) on Apr 16, 2019 at 1:03pm PDT
यदि हजुर राती चढ्ने सोच्दै हुनु हुन्छ भने , फिफ्थ स्टेसनमा खाना खाएर यात्रा सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। यात्राको क्रममा ईनर्जी बार, मुसेली बार, ओनिगिरि, चकलेट जे जे लादा पनि हुन्छ। पानी भने २ लिटर माथि बोक्नुहोस। फुजीको समिट मा ५०० ml को पानीलाई ५०० येन पर्छ। समिटमा स्न्याक्स, चिया, कफी पनि लिन मिल्छ। तर फिफ्थ समिट कटे पछि फोहोर फ्याल्ने ठाउँ हुदैन। आफ्नो फोहोर आफैले बोकेर तल लिएर आउनु पर्छ। खुल्ला पैसा पनि लिएर आउनुहोस्। फुजीमा त्वाईलेट प्रयोग गरेको ३०० येन सम्म पर्छ।
सिजनको बेला सिन्जुकु बाट फिफ्थ स्टेसन सम्म सिधै बस लाग्ने हुनाले यो सबै भन्दा सजिलो तरिका हो। बस टिकेट वान वेको २९०० यन पर्छ। सिन्जुकु एक्सप्रेस वे बस टर्मिनलबाट छुट्ने बसले फुजी फिफ्थ स्टेसन २.५ घण्टामा पुर्याउदछ।
A post shared by キミ (@eneri_irene) on Apr 13, 2019 at 8:10pm PDT
ट्रेनबाट जादा चाही अलि महंगो पर्छ। सिन्जुकु स्टेसन बाट फुजी एक्स्कर्सन एक्सप्रेस ट्रेन लाग्दछ। यो ट्रेन ले २ घण्टा जतिमा कावागुचीको स्टेसन पुर्याउछ। मूल्य चाहि वान वेको ४०६० यन पर्दछ। JR चुओ स्पेसल र्यापिड चढ्ने हो भने २४६० यन जति लाग्द्छ। यो ट्रेनले ३ घण्टामा कवगुचिकोएकि पुर्याउछ।
५. ईमरजेन्सी सप्लाई
उचाईमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने हुनाले धेरैलाई लेक लाग्न सक्ने हुन्छ। यो जो कोहिलाई पनि हुन सक्छ। यस बाट बच्न हाईक बिस्तारि गर्ने र आफ्नो जिउलाई उचाई संग घुल्न दिनु पर्छ। अक्सिजन क्यान बोकेर लादा ईमरजेन्सीमा काम लाग्दछ। फर्स्ट एड बक्स लान केहि गरि नबिर्सिनु होस्। त्यसैगरि अत्यधिक चिसो बाट बच्न कम्बिनिमा पाइने हिट प्याक (होकाईरो) लिनु भयो भने राहत हुन्छ।
लगेज र सुटकेसले अब हजुरको एरपोर्ट सम्मको यात्रा कष्टकर बनाउने छैन।
जापानमा घुम्नै पर्ने ५ सुन्दर मन्दिर
के होला यो जापानको खतरनाक जनावर
जापानको आनिमेले विश्वलाई कसरि प्रभावित पारेको छ।
जापानको “रेफुजी पोलिसी” (शरणार्थी नीति) सम्बन्धित थाहापाई राख्नु पर्ने तथ्यहरु ।
यात्रा गर्दा ठुलो तनाब भनेको लगेजलाई कसरी घर बाट एरपोर्ट र एरपोर्ट बाट घर लिएर आउनेहोला भन्ने हुन्छ। हजुर जतिनै हलुका ट्राभल गर्ने खालको भएपनि ब्यागेज ओसार्नु झन्झटिलो काम हो। अझ अलि लामै बसाईको लागि जापान को यात्रा गर्ने बिद्यार्थीहरु वा पर्यटकहरुको धेरै नै सामान हुने भएकोले लगेज कष्टकर बन्दिन्छ। फर्किदा झन् सपिङ्ग गरेको सामानहरु…
क्योतो घुम्नको लागि निकै मनोरम सहर हो। क्योतो बिदेशी होस् या आन्तरिक पर्यटक दुबैको लागि निकै प्रसिद्ध छ। यसलाई अद्भुत बनाउने भनेको यहाँको ऐतिहासिक र संस्कृतिक झझल्को दिने ल्यान्डमार्क, मन्दिर, गुम्बा, बाटोहरु हुन्। त्यति मात्र नभएर क्योतोमा पूर्ण रुपमा भिजन किमोनो लगाएर हजुर हिड्दै क्योतोको सुन्दरतामा मन्त्र मुग्ध हुन सक्नु हुनेछ।तर घुम्न आएका सबैको एउटै…
नेपाल जस्तै जापानमा पनि हजारौ मन्दिरहरु छरिएका छन्। सबै मन्दिर घुम्ने हो भने बर्सौ लाग्छ। हजुर यदि जापानमै बस्नु हुन्छ भने त बिस्तारै घुम्न मिल्ने हुदा थुप्रै मन्दिरहरु जान सक्नु हुन्छ। तर यदि हजुर जापान पर्यटक बनेर आउनु भएको छ भने केहि दिनको बसाईमा छुटाउनु नहुने सुन्दर ५ मन्दिरहरुको जानकारी गराउने छौ। कुन कुन हुन्…
गर्मि मौसम आए संगै जापानमा एउटा खतरनाक जनावर धेरै ठाउँमा भेटिन सकिन्छ। हामी यहाँ होक्काईदोको बदेल वा ओकिनावाको डरलाग्दो जेलिफिस को कुरा गर्दै छैनौ। हामीले यहाँ भनेरहेको प्राणी बिल्कुलै फरक र हजुरको सोचको बाहिर छ। यो जनावरले जापानमा सबै भन्दा बढी मानिस घाइते बनाउछ। यो प्राणीको नाम हो जापानी जाईण्ट होर्नेट। यो एक प्रकारको भमरा…
के हजुर यी जापानी खाने कुरा खान सक्नु हुन्छ ?
हजुरहरुले थाहा पाउनुपर्ने केहि जापानी लेखक
टोकियोको डिज्नी पार्कमा यी ११ टिप्स लिएर म्याजिकल समय बिताउनुहोस
ब्रेकिङ्ग न्युज : कोरोन भाईरस्को केस जापानमा १००० पुग्यो